ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသံရုံးမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၇,၅၀၀ တန်ဘိုးရှိ အထောက်အကူပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခြင်း
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက် မွန်းလွဲ ၂:၀၀ နာရီတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၇,၅၀၀ တန်ဘိုးရှိ အထောက်အကူပစ္စည်းများကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသံရုံးက ပေးအပ်လှူဒါန်းသည့် အခမ်းအနားအား ဆေးသုတေ သနဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ၌ ကျင်းပရာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသံရုံးမှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ Mr. George Sibley နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ USAID Myanmar နှင့် CDC တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။ ရှေးဦးစွာ သံရုံး ယာယီတာဝန်ခံ Mr. George Sibley က လှူဒါန်းရသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောကြားပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စား ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းက ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြား ပါသည်။ ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသံရုံးမှ သံရုံးယာယီ တာဝန်ခံ Mr. George Sibley နှင့် စစ်သံမှူး Colonel Edward Evans တို့က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၇,၅၀၀ တန်ဘိုးရှိ Surgial masks နှင့် gloves တို့ကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာကို ပြန်လည်ပေးအပ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးကြပြီး အခမ်းအနားကို မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းပါသည်။ အခမ်းအနား အပြီးတွင် Media များ၏ မေးမြန်းချက်များကို သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ Mr. George Sibley နှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်း တို့က ပြန်လည်ဖြေကြားကြပါသည်၊၊
ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနသို့ အထက (၁) လမ်းမတော် (စိန့်ဂျွန်း) ကျောင်းသားဟောင်းများ (၁၉၇၉ ခုနှစ်) မိသားစုက ဒုတိယအကြိမ် အလှူငွေနှင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခြင်း
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက် (အင်္ဂါနေ့) မွန်းလွဲ ၂:၀၀ နာရီတွင် အထက (၁) လမ်းမတော် (စိန့်ဂျွန်း) ကျောင်းသားဟောင်းများ (၁၉၇၉ခုနှစ်) မိသားစုက ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနရှိ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် နေကြသော ဝန်ထမ်းများကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် အလှူငွေနှင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်းသည့် အခမ်းအနားကို ဆေးသုတေသန ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ၌ ကျင်းပရာ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ အထက (၁) လမ်းမတော် (စိန့်ဂျွန်း) ကျောင်းသားဟောင်းများ (၁၉၇၉ ခုနှစ်) မိသားစုတို့ တက်ရောက်ကြ ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းက ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် အထက (၁) လမ်းမတော် (စိန့်ဂျွန်း) (၁၉၇၉) ခုနှစ် ကျောင်းသားဟောင်း များကိုယ်စား ဦးသန်းနိုင်က လှူဒါန်းရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ ဒုတိယအကြိမ် အလှူငွေနှင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို အလှူရှင်အသီးသီးက ပေးအပ်လှူဒါန်းကြရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများကို ပြန်လည် ပေးအပ်ပါသည်၊၊
ဆက်လက်ပြီး အထက (၁) လမ်းမတော် (စိန့်ဂျွန်း) (၁၉၇၉) ခုနှစ် ကျောင်းသားဟောင်းများ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်း နှင့် တာဝန်ရှိသူများ အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပြီး အခမ်းအနားကို မွန်းလွဲ ၃:၀၀ နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းပါသည်၊၊
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ US$ 43,000 တန်ဘိုးရှိ Negative Pressure Ambulance ကားများလှူဒါန်းခြင်း
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက် နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd. (BAIC Group)၊ FOTON Motor Co., Ltd. နှင့် IME International Co., Ltd. တို့ပူးပေါင်း၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၊ Covid-19 ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြု ရန်အတွက် US$ 43,000 တန်ဘိုးရှိ Negative Pressure Ambulance ကားများ ပေးအပ် လှူဒါန်းသည့် အခမ်းအနားကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ၌ ကျင်းပရာ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ စီးပွားရေးသံမှူး Mr. Tan Shu Fu နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိ သူများ၊ BAIC Group၊ FOTON Myanmar Office မှ Chief Representative Mr. Zhang Xin Lei နှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ IME International Co., Ltd မှ Chief Operating Officer ဒေါက်တာညီညီလတ်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ဖိတ်ကြားထားသော မီဒီယာများ တက်ရောက် ကြပါသည်။
ရှေးဦးစွာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ စီးပွားရေးသံမှူး Mr. Tan Shu Fu က အမှာစကားပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စား ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဇော်သန်းထွန်းက ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုစကား ပြန်လည်ပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ BAIC Group၊ FOTON Myanmar Office နှင့် IME International Co., Ltd မှ ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာညီညီလတ်က လှူဒါန်းရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြား ပြီး ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ US$ 43,000 တန်ဘိုးရှိ Negative Pressure Ambulance ကားများ ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို ပြန်လည်ပေးအပ်ပါသည်။
ထို့နောက် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ စီးပွားရေးသံမှူး Mr. Tan Shu Fu၊ BAIC Group၊ FOTON Myanmar Office မှ Chief Representative Mr. Zhang Xin Lei နှင့် IME International Co., Ltd. မှ Chief Operating Officer ဒေါက်တာညီညီလတ်၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ စုပေါင်း၍ အမှတ်တရဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးပြီး အခမ်းအနားကို နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းပါသည်။ အခမ်းအနားအပြီးတွင် Media များ၏ မေးမြန်းချက်များကို တာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည်ဖြေကြားကြပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ 2020 KOICA - MMKC Corporate Social Responsibility Program မှ Reagent, Surgical Gown နှင့် VTM များလှူဒါန်းခြင်း
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁၃ရက်(တနင်္လာနေ့) မွန်းလွဲ ၃:၀၀ နာရီတွင် 2020 KOICA - MMKC Corporate Social Responsibility Program မှ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၊ Covid-19 ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် Reagent, Surgical Gown နှင့် VTM များ ပေးအပ်လှူဒါန်းသည့် အခမ်းအနားကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ၌ ကျင်းပရာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ Mr. Hahm Jeonghan (Deputy Chief of Mission)၊ KOICA Myanmar Office မှ Chief Representative Ms. Lee Youn Soo နှင့် Deputy Representative Ms. Hwang Sulim၊ မြန်မာကိုအိကာအသင်း (MMKC) ဥက္ကဌ ဦးစန်းလွင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြ ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ Mr. Hahm Jeonghan (Deputy Chief of Mission) နှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းတို့က အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ မြန်မာကိုအိကာ အသင်း (MMKC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစန်းလွင်နှင့် KOICA Myanmar Office မှ Chief Representative Ms. Lee Youn Soo တို့က လှူဒါန်းရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်း ထံ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ Mr. Hahm Jeonghan (Deputy Chief of Mission)၊ KOICA Myanmar Office မှ Chief Representative Ms. Lee Youn Soo နှင့် မြန်မာကိုအိကာအသင်း (MMKC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစန်းလွင်တို့က Reagent၊ Surgical Gown နှင့် VTM များကို ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပြန်လည်ပေးအပ်ပါသည်။
ထို့နောက် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ Mr. Hahm Jeonghan (Deputy Chief of Mission)၊ KOICA Myanmar Office မှ Ms. Lee Youn Soo (Chief Representative) နှင့် မြန်မာကိုအိကာအသင်း MMKC ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစန်းလွင်တို့ စုပေါင်း၍ အမှတ်တရဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးပြီး အခမ်းအနားကို မွန်းလွဲ ၃:၃၀ နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းပါသည်။ အခမ်းအနားအပြီးတွင် Media များ၏ မေးမြန်းချက်များကို တာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည်ဖြေကြားကြပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံမှ အလှူငွေ USD 50,000 နှင့် The Bank of Investment and Development of Vietnam (BIDV) Yangon Branch နှင့် Mytel Telecom International Myanmar Co., Ltd တို့မှ Face Mask နှင့် အလှူငွေများလှူဒါန်းခြင်း
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁၃ရက် (တနင်္လာနေ့) နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံနှင့် The Bank of Investment and Development of Vietnam (BIDV) Yangon Branch၊ Mytel Telecom International Myanmar Co., Ltd တို့မှ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန Covid-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အလှူငွေနှင့် Face Mask များ ပေးအပ်လှူဒါန်းသည့် အခမ်းအနားကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ၌ ကျင်းပရာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Ly Quoc Tuan နှင့် Senior Colonel Mr. Nguyen Thanh Dong၊ Commercial Counselor Ms. Vo Thi Ngoc Diep၊ Second Secretary များ ဖြစ်ကြသော Mr. Nguyen Van Trinh နှင့် Mr. Le Quang Hung၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူ များ၊ Mytel Telecom International Myanmar Co., Ltd မှ Mr. Hoang Trung Thanh (Chief Executive Officer)၊ Ms. Pham Huyen Anh (Admin Director)၊ Mr. Nguyen Dinh Thinh (Segments & Marketing Director)၊ Bank of Investment and Development of Vietnam (BIDV) မှ Mr. Dang Hai Nha (CEO of Yangon Branch)၊ Mr. Nguyen Anh Hieu (Head of R & D)၊ Mr. Hoang Quoc Hoan (Deputy Head of Planning) တို့ တက်ရောက်ကြပါသည်။
ရှေးဦးစွာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Ly Quoc Tuan က လှူဒါန်းရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စား ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းက ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုအမှာစကား ပြန်လည်ပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက်သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Ly Quoc Tuan က အလှူငွေ US$ 50,000/- ကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို ပြန်လည် ပေးအပ်ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး Mytel Telecom International Myanmar Co., Ltd မှ Mr. Hoang Trung Thanh (Chief Executive Officer) က US$ ၂၀,၀၀၀/- တန်ဘိုးရှိသည့် Face Mask များနှင့် US$ ၅,၀၀၀/- ကိုလည်းကောင်း၊ Bank of Investment and Development of Vietnam (BIDV) မှ Mr. Dang Hai Nha (CEO of Yangon Branch) က ကျပ် ၂,၀၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်) ကိုလည်းကောင်း ပေးအပ်လှူဒါန်းကြရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်က လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ပါသည်။
ထို့နောက် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ly Quoc Tuan၊ Mytel Telecom International Myanmar Co., Ltd နှင့် Bank of Investment and Development of Vietnam (BIDV) မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ စုပေါင်း၍ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပြီး အခမ်းအနားကို နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းပါသည်။ အခမ်းအနားအပြီးတွင် Media များ၏ မေးမြန်းချက်များကို တာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည် ဖြေကြားကြပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနသို့ ချစ်မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းမှ အထောက်အကူပစ္စည်းများလှူဒါန်းခြင်း
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက် (သောကြာနေ့) မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ချစ်မေတ္တာ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုင်းထွန်းကျော် ဦးဆောင်၍ Covid-19 ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြသော ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် အထောက်အကူ ပစ္စည်းများဖြစ်သော Face Mask ၂၀၀၀၊ KN 95 Mask ၇၂၀၊ PPE ၃၀ နှင့် Glove ၆၀၀ တို့ကို လာရောက် ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စီမံ/ဘဏ္ဍာ) ဒေါက်တာဇော်မြင့်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများက လက်ခံရယူပြီး ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာကို ပြန်လည်ပေးအပ်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနသို့ MEDICARE Health and Beauty Co., Ltd မှ အလှူငွေကျပ်ခြောက်သိန်းလှူဒါန်းခြင်း
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့ (သောကြာနေ့) နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသော ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အလှူငွေကျပ်ခြောက်သိန်း (၆၀၀,၀၀၀/-) ကို MEDICARE Health and Beauty Co., Ltd မှ တာဝန်ရှိသူများက လာရောက်ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ဆေးသုတေသန ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) ဒေါက်တာ လှိုင်မြတ်သူနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများက လက်ခံရယူပြီး ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာကို ပြန်လည်ပေးအပ်ပါသည်။
တာဝန်ခံမှုရှိသောသုတေသနဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သုတေသနကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသင်တန်း Responsible Conduct of Research (RCR) and Research Ethics Training Workshop ဖွင့်ပွဲကျင်းပခြင်း
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက် နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် တာဝန်ခံမှုရှိသော သုတေသန ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သုတေသနကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ သင်တန်း Responsible Conduct of Research (RCR) and Research Ethics Training Workshop ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၌ ကျင်းပရာ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်း တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်များနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန သုတေသနကျင့်ဝတ်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ (Institutional Review Board) များမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ သင်တန်းပို့ချမည့်သူများ၊ သင်တန်းကြီးကြပ် ပံ့ပိုးမည့်သူများ၊ သင်တန်းတက်ရောက်မည့်သူများ စုစုပေါင်း (၅၄) ဦး တက်ရောက်ကြသည်။
အဆိုပါသင်တန်းကို လူပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သော သုတေသနများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သုတေသန ကျင့်ဝတ်၏ အရေးပါပုံကိုသိရှိစေရန်၊ အရည်အသွေးတာဝန်ခံနိုင်သော သုတေသနဆောင်ရွက် ခြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်မြင့်မားတိုးတက်လာစေရန်၊ ဆေးတက္ကသိုလ်နှင့် နှီးနွယ်တက္ကသိုလ်များ တွင် ကျင့်ဝတ်နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကို တန်ဖိုးထားသော သုတေသနယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားလာ စေရန်နှင့် လွဲမှားသောသုတေသန ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြုအမူများကို တားဆီးနိုင်ရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဇူလိုင် (၇) ရက်နေ့ မှ (၁၁) ရက်နေ့အထိ ငါးရက်တိုင် သင်ကြား ပို့ချမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာနအသီးသီးမှ သုတေသီများ၊ ပညာရှင်များ၊ ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် နှီးနွယ်တက္ကသိုလ်များမှ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ (၃၀) ဦးတက်ရောက်ကြပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေးများ လှူဒါန်းခြင်း
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၁ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ် ဆေးများ လှူဒါန်းသည့် အခမ်းအနားကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ၌ ကျင်းပရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ WHO Representative to Myanmar Dr. Stephan Paul Jost နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းက ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်း ဆက် စကားပြောကြားပြီး WHO Representative to Myanmar Dr. Stephan Paul Jost လှူဒါန်းရခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် Dr. Stephan Paul Jost က Quadrivalent Influenza Vaccines 3100 Doses နှင့် Trivalent Influenza Vaccines 20,000 Doses၊ စုစုပေါင်း 23,100 Doses ကို ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စား ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်က လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို ပြန်လည်ပေးအပ်ပါသည်။
Read June 2020 Events ...